Iwe unofanirwa kuwedzera printer nyowani pakombuta yako? Heino maitiro ekuita saizvozvo Windows 11.
Windows 11 inogara ichiedza kuona nekuisa chero printa yemuno (sevaya vanoshandisa USB neDB-25 tambo) otomatiki. Nekudaro, kana iyo system ikatadza kuimisa, uri kubata neprinter yekare, kana iwe uchida kubatanidza isina waya printer, unozofanirwa kuiwedzera iwe pachako.
Kunyangwe uchifanira kuisa a nyowani-itsva yakawanda-inoshanda printer kana yekare dot matrix, inkjet, kana laser printer kubva kuvagadziri vakaita seHP, Canon, Epson, uye Hama, Windows 11 inosanganisira nzira dzakawanda dzekumisa mudziyo.
Muizvi Windows 11 nhungamiro, tichakufambisa nenzira dzakasiyana dzekuwedzera printa ine waya kana isina waya kune yako laptop kana desktop komputa.
Maitiro ekuseta USB kana Wi-Fi printer pa Windows 11
Kuti uise printer Windows 11, shandisa nhanho idzi:
Click on Makaralı & zvishandiso.
Baya Maprinta & scanners kurongedza.
Baya Wedzera kifaa (Refresh) bhatani.
Baya Wedzera kifaa bhatani reiyo isina waya kana printa yakabatana munharaunda.
Kana uchinge wapedza nhanho, iyo sisitimu inoona uye nekuisa yekutanga mutyairi weiyo chaiyo printa.
Maitiro ekuseta printer nemaoko pa Windows 11
Kana iyo system isingakwanise kumisa printer yega nekuti iprinta yekare kana kuti pane dambudziko rekuenderana, unogona kuisa mudziyo nenzira dzinenge nhatu: unogona kushandisa legacy wizard kuisa printer nemaoko, gadzirisa TCP/IP yekubatanidza kana izvi iprinta inetiweki, kana shandisa sarudzo yekuwedzera printa yemuno nekusarudza chiteshi nemaoko.
Isa printer nemaoko
Kuisa printer uchishandisa legacy wizard on Windows 11, shandisa nhanho idzi:
Baya Wedzera kifaa bhatani.
Baya Wedzera nemaoko kuita.
Nhamba yakakurumidza: Iyi sarudzo inogona kutora kanguva kuti ioneke apo sisitimu ichitsvaga maprinta munharaunda uye munetiweki.
Sarudza iyo Printa yangu akura zvishoma kuita.
Sarudza printer kubva pane rondedzero.
Baya Next bhatani.
Baya Windows Update bhatani (kana zvichibvira).
Nhamba yakakurumidza: Windows haisanganisi madhiraivha ekutanga, zvinoreva kuti kana ukadzvanya “Windows Gadzirisa" bhatani, zvinogona kutora nguva kusvika ruzivo rwavapo. Kana iyi iri printa yekare uye iyo chaiyo yemutyairi modhi isipo, saka unogona kuedza kusarudza yepedyo modhi.
Sarudza rudzi rweprinta kubva kuruboshwe.
Sarudza printa modhi kubva kurudyi.
Kurumidza tambo: Kana mutyairi weprinta asipo, unogona kudzvanya iyo Iva neDisk bhatani kuti upe mutyairi nemawoko. Unogona kugara uchitarisa mugadziri wemudziyo wako kuti utore madhiraivha eprinta.
(Sarudzo) Simbisa zita reprinta.
Sarudza iyo Usagovera printa iyi kuita.
Baya Dhinda peji rekuedza bhatani kuratidza kuti mudziyo uri kushanda.
Baya pedza bhatani.
Mushure mekunge mapedza nhanho, kana peji rekuyedza rakadhinda, iwe unozoziva kuti printa yakaiswa zvakanaka pairi Windows 11.
Isa network printer
Kuisa network printer, shandisa matanho aya:
Sarudza iyo Wedzera printer uchishandisa TCP/IP kero kana zita remugamuchiri kuita.
Sarudza iyo TCP/IP mudziyo sarudzo uchishandisa "Chishandiso chemhando" yekudonha-pasi menyu.
Simbisa IP kero yeprinta mundima ye "Hostname kana IP address" - semuenzaniso, 10.1.4.128.
Kurumidza tambo: Iwe unogona kuwana ruzivo urwu pane mudziyo wakavakirwa-mukati skrini. Nekudaro, iwe ungangoda kutarisa yako mugadziri wekutsigira webhusaiti kuti uwane rumwe ruzivo.
(Sarudzo) Shandisa siya zita rekutanga mundima ye "Port name".
tarisa Bvunza printer uye wotosarudza mutyairi wekushandisa sarudzo (inokurudzirwa).
Kana uchinge wapedza matanho, network printer ichaisa pakombuta.
Isa printa yemuno
Kuisa printer uchishandisa parallel kana serial tambo, shandisa matanho aya:
Sarudza iyo Wedzera wepa printer yepakita kana network network printer nemitemo yekushandisa kuita.
Sarudza chiteshi cheprinta uchishandisa "Shandisa yagara iripo yekudonhedza" menyu.
Nhamba yakakurumidza: Kana uri kushandisa USB tambo, sarudza USB sarudzo. Kana uri kushandisa tambo inofambirana ine “DB-25” adapta, sarudza LPT1 port.
Mushure mekunge mapedza matanho, printer yekare inofanira kuisa uye kugadzirira kudhinda Windows 11.
Paunenge uchishandisa otomatiki setup, Windows 11 ichaisa mutyairi wekutanga weprinta. Kana iwe uchifanira kutora mukana wezvimiro zvepamberi (kana zvichibvira), ungangoda kuwedzera printer uchishandisa software yemugadziri.
Kana uri kutamba Windows 10 pachinzvimbo chegumi nerimwe uye uine mibvunzo nezve software iyoyo, tarisa gwara redu pa Windows 10. Zvikasadaro, farira kudhinda neprinta yako itsva yakabatana!